ITheku - I-Airbnb
Amherst, Nova Scotia, i-Canada
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Marilyn
I-Haven iyindawo ephephile, enethezekile, nenokuthula lapho uzokwaneliseka futhi ujabule. Ihlanzekile, ithulile, ithokomele, futhi iyindawo ekahle yokuphumula noma yokubungaza izivakashi. Ihlomele ngokuphelele ukuhlala okufushane noma okude ngakho konke ukunethezeka kwekhaya. Indawo yokupaka enhle, i-wifi, kanye nesitolo esigcwele esigcwele esinemikhiqizo emisha, ukubhaka, futhi esaziwa ngokukhethwa okuhle kwenyama okuhamba imizuzu emi-5 nje, nazo ziletha. Indawo ithule futhi inobungane. Ukungena kwebhokisi lokukhiya.
Kukhona igceke elikhulu elingemuva ukuze izingane zakho noma izilwane zakho zigijime. Inezitezi ezimbili ezinkulu. Idekhi engemuva ene-awning ingeyakho kuphela, indawo engaphambili yabelwe izivakashi ezisezingeni eliphezulu. Basebenzisa indlela yokungena engaphambili ukuze bangene esakhiweni. Umatilasi ukhululekile ukulala. I-Double bed ibekwe endaweni yokuhlala ene-TV enesikrini esiyisicaba nendawo yomlilo. Umbhede owodwa ubekwe ekamelweni elincane elisezingeni eliphansi. Ifakwe amaphampu okushisa amabili, futhi ifaka i-a/c. Kunezitebhisi ezinhlanu kuphela zokukhuphukela emnyango.
Indawo ethule kakhulu, enobungane.
Ngihlale nginikeza izinombolo zocingo ezi-3 lapho sitholakala khona uma sidingeka. Siphila Ukugunda ngakho siyatholakala izidingo zakho. Uma ubheke ukuzivalela wena singasiza ngokuletha igilosa uma u-oda kwa-Atlantic Super Store futhi sekuyihora lesi-5 ezimpondweni. Futhi singakunikeza inombolo yocingo esitolo esithengisa izinto ezilethwayo.
Ngihlale nginikeza izinombolo zocingo ezi-3 lapho sitholakala khona uma sidingeka. Siphila Ukugunda ngakho siyatholakala izidingo zakho. Uma ubheke ukuzivalela wena singasiza ngoku…
Hlola ezinye izinketho ezise- Amherst namaphethelo